The Ab Presents Nepal » गलबन्दी गाएक प्रकाश सपुतले लेखे शम्भु राइलाइ मन छुने पत्र , के छ पत्रमा हेर्नुहोस (पत्रसहित)
गलबन्दी गाएक प्रकाश सपुतले लेखे शम्भु राइलाइ मन छुने पत्र , के छ पत्रमा हेर्नुहोस (पत्रसहित)
गलबन्दी गाएक प्रकाश सपुतले आफ्नो वेब साइट प्रकाश सपुत डट्कममा राखेको पत्र जस्ताको तस्तै साभार गरिएको छ हेर्नुहोस ।
आदरणिय शम्भु राई सर नमस्कार । आराम छु आराम चाहान्छु ।
मैले सोचेकै थिएन सर लोक गित गाएर यतिबिधि चर्चित भईन्छ भनेर । बुढापाकाले मात्रै त्यो पनि पश्चिम पश्चिम भेग तिर सुनिने लोकदोहोरी गाएर कहिल्यै सेलिब्रिटि बनिन्छ जस्तो लाग्थेन । त्यसैले गति नै त छाडिएन तर अनेक तिक्डम चै लगाएकै हो । एकबारको जुनिमा गाउने ईलम गरिसकेपछि २/४जनाले चिनेनन भने के गाउनु गाठे भन्ने आत्मबोध भैरहन्थ्यो । त्यसैले गितै गाएर पेट र परिवार पालेको भएपनि म कहिल्यै खुसी भैन । सपना ज्यु को त्यु छ । भोक ज्युको त्यु छ भनेर निकै निरासामा गुज्रिरहेको थिए । कसो कसो दोहोरी व्याटल ले अलिअलि भोंक मेटायो । त्यहि चिनिने भोक क्या सर । पछि बोल माया गर्दा मैले चिनिने भन्दा सम्झिने तिर अल्ली बढि ढल्केर काम गरे र आफुलाई अलिधेरै अंक बटुले दर्शकस्रोता बाट । ब्याटल टु ले मेरो परिचय मा थोरै प्रश्न उठायो । त को होस ? क़ताको मुन्छे होस ? भनेर अलिअलि नंम्बर घट्यो पनि तर क्रियटिभिटि मा नम्बर त जोडिएकै हो । कहिलेकाहि उत्तर गलत हुदा पनि अक्षर राम्रो भएर नम्बर पाईन्थ्यो नि सर स्कुलमा । त्यो पनि गणितमा, बिज्ञानमा होईन नेपाली बिषयमा । हो संगित पनि नेपाली बिषय जस्तै लाग्छ सर । गणितको, बिज्ञानको जस्तो ठ्याक्कै उत्तर नमिले पनि मिठो भाषा लेख्न जान्यो भने, राम्रो अक्षर कोर्न जान्यो भने लगभग पास अंक त पाईने । १०० मा ३२ ।
तर यो मेरो वर्किङ आवर्स हो सर । सिर्जनशिल हुन सक्ने र सोहि अनुसार दौडिन पनि सक्ने उमेर हो मेरो । यो समयमा मलाई नअल्झाईस्यो न सर । म पनि केबल नाफा घाटा मात्रै भन्दा पनि केहि फरक र राम्रो गर्न सकिन्छ कि भनेर धेरै रात अनिदो बस्छु । गल्बन्दी को लागि पनि मैले धेरै नै मेहेनत गरेको छु सर । जहाँ सम्म नाम राख्ने कुरा छ । यो धेरै लोक भाकाहरुबाट प्रभावित छ सर । यता पश्चिम तिरको भजनको ताल र रत्यौलीको लय मिस्रित छ भने हजुरको देउसी बाट पनि प्रभावित भएछ । अब कसकसको नाम राखौ सर । नाम में क्या चिज हे ? अब यसै पनि आजको मिती सम्म सबै भन्दा छोटो समयमा करोड़ क्लबमा जाने गित कुन हो भन्ने प्रश्नमा उत्तर आउछ – गल्बन्दी । तर उत्तर यति मै सकिदैन । “ ए त्यो शम्भु राई संग मिलेको गित “ भनेर आउने भैक्यो । विश्वास बिचित्रको चिज हो सर । यो निकै ज़रा गाडेर बसेको हुन्छ मानीसहरुमा । अब तपाईले मिलेकै हो भन्ने प्रमाणित गरे पनि मिलेको छैन भन्नेलाई विश्वास लाग्दैन । मैले हैन मिलेकै छैन भनेर चिच्याय पनि गित उस्तै उस्तै सुन्नेको कान फेर्न सक्दिन । त्यसैले एउटा सिर्जना माथी दर्शक स्रोताको चासो, चिन्ता र माया सम्झेर यो प्रसंग यहि स्वतन्त्र छोड़ौ न सर । म तपाईलाई असाध्यै सम्मान गर्छु । तपाई मलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । आगामी सिर्जनाको लागि सचेत बनाउनु भएकोमा धन्यबाद सर । तर म र म जस्तै नया पुस्तालाई डर पैदा नगरिदिनु होला । जो गितसंगित मा केहि गरौ भन्ने हुटहुटिले लामो संघर्षपछि अलिअलि तंग्रिएका छौ ।
धन्यबाद सर ।